သတင်း | Holmbygden.se
ဒီနေရာတွင်အပေါငျးတို့သသတင်း Holmbygden.se ပျေါမှာထငျရှားရှာတှေ့နိုငျ
သငျသညျ, တစ်ဦးအထူးသဖြင့်စကားလုံးသို့မဟုတ်စာပိုဒ်တိုကိုရှာဖွေကို Ctrl + F ကိုနှိပ်အများဆုံး browser များအတွက်တဦးတည်းလုပ်နိုင်တဲ့နှင့်ရေးသားဖို့လိုပါလျှင်. သငျသညျ RSS ကို format နဲ့ပိုကောင်းတဲ့သတင်းပိုနှစ်သက် Do, သင်သည်ထိုသူတို့ကဒီမှာတွေ့ပါလိမ့်မယ် .
– စတင်ချိန် မှစ. Holmbygden.se ညာဘက်အပေါ်အားလုံးသတင်း 2011-12-01.
– မတိုင်မှီ HBU ရဲ့ယခင်က်ဘ်ဆိုက် Holmbygden.nu ကနေအားလုံးအဟောင်းသတင်း 2012.
17/3: #ShepherdsHut årsmöte 31/3 တနင်္ဂနွေတွင်, 31:မတ်လ Holmes ခရိုင်၏ဖွံ့ဖြိုးရေးနှစ်ပတ်လည်အစည်းအဝေးစောင့်ရှောက်. လာနားထောင်မှလှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါသည်, ကော်ဖီမသောက်ရနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ခရိုင် Holmes ဖွံ့ဖြိုးဆဲပေါ်မှာရှိ. အချိန်နှင့်နေရာ: S က ... ဆက်ဖတ်ရန်
17/3: နှစ်ပတ်လည်အစည်းအဝေးကို Holmes FVO Holmes Fiskevårdsområdeကြာသပတေးနေ့ကကိုင် 21/3 တွင် 19:00 Församlingshemmetအတွက်နှစ်ပတ်လည်အစည်းအဝေး. ကျနော်တို့ကော်ဖီပူဇော်. ကြိုဆိုပါတယ်! Holmes FVOဆက်ဖတ်ရန်
6/3: နှစ်ခု "taiga စာရင်း" မှ Calling Navarn မှာဇီးကွက်. ဓာတ်ပုံကို: ပတေရုသ Berglund. Än så länge är korpar och domherrar ”ljudföroreningar” i omgivningarna runt Holmsjön och Navarn, plus några mesar som startat s... ဆက်ဖတ်ရန်
3/3: Byggnation av vindkraftsparkerna Kråktorpet och N... Eolus လေတိုက်ခြံ၏ဆောက်လုပ်ရေး Crow အဘိဓါန် croft နှင့် Uusimaa တောင်တန်းလာမည့်အဆင့်ရိုက်ထည့်ဖို့အကြောင်းကြောင်း Holmes နေထိုင်သူများကိုကြေညာရန်ဆန္ဒရှိသော်လည်း. Från början av mars månad beräknas st... ဆက်ဖတ်ရန်
2/3: Österströms Baker Cabin အသင်းမှနှစ်ပတ်လည်အစည်းအဝေးကျင်းပ Österströmsအိတ်အားလပ်ရက်ခြံဝင်း (OBF) နှစ်ပတ်လည်အစည်းအဝေးကိုကျင်းပခဲ့ပါသည် 27/1 -19 och låter här meddela kontentan av mötet. ပုံမှန်နှစ်စဉ်အစည်းအဝေးတွင်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှု, samt n&ari... ဆက်ဖတ်ရန်
28/2: Holmes အတွက်လူသားခငျြးအာူးအပေါ် SVT အစီရင်ခံစာ အစီရင်ခံစာများစေတနာ့ဝန်ထမ်းရေနစ်သေဆုံးအတွက် SMS ကိုအရေးပေါ်နှိုးစက်ကနေတဆင့်သတိပေးနေကြသည်ရှိရာဆွီဒင်အတွက်ပထမဦးဆုံးမြို့ဖြစ်ခဲ့သည် Holmes ၏ပြောပြ, ယာဉ်အသွားအလာမတော်တဆမှု, မီးနှင့်ရေနစ်သေဆုံး. Projektet kan komma att utökas utanför Medel... ဆက်ဖတ်ရန်
15/2: စီမံကိန်းအားဖြည့်အိမ်နီးချင်းအပေါ် SVT Holmes SVT ရဲ့သတင်းထောက်အန်နာ Beijron အဆိုပါ Olle Frisk နှုတ်ဆက်ပြီး, ရွာအားဖြည့်အပေါင်းအဘော်တို့၏တဦးတည်း, နှင့်ရွာ၏ကိုယ်ပိုင်စုဆောင်းအရေးပေါ်ပစ္စည်းကိရိယာများကြည့်ရှု. တီဗီပေါ်တွင်ယနေ့ည 1 18:33 (l&a... ဆက်ဖတ်ရန်
14/2: Glad alla hjärtans dag önskar Anundgårds försk... တစ်ဦးကပျော်ရွှင် Valentine Day ကို snowman ဆန္ဒရှိသော်လည်း, Anund Manor မူကြိုမှာကလေးများနှင့်ဝန်ထမ်းများ.ဆက်ဖတ်ရန်
12/1: Jesper Eliasson – Nya revystjärnan från Sunnan... Jesper som förortskillen ”Nils”. ဓာတ်ပုံကို: ST. Jesper လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်အနည်းငယ်ကအခွင့်အလမ်းအားဖြင့်ပြဇာတ်ရုံနဲ့စတင်. Nu blomstrar han som den nya revystjärnan och gör succé på... ဆက်ဖတ်ရန်
24/12: Anundgårdsspåretအတွက်Nyspårat ယခုnyspåratနှင့်တငျမွှောကျမိုဘိုင်း Holmes Vallen မှာသင် lit လမ်းကြောင်းအကြောင်းကြားရန်ခရစ္စမတ်ဧဝကိုဂုဏ်အသရေ. စန်တာမရောက်မှီတစ်လန်းဆန်းအလှည့်ယူဖို့အခွင့်အလမ်းကိုယူ! Elljuset är även p&arin... ဆက်ဖတ်ရန်
နှစ်ပတ်လည်အစည်းအဝေးကို Holmes FVO
နှစ်ခု "taiga စာရင်း" မှ Calling
လေတိုက်ခြံ Crow အဘိဓါန် croft နှင့် Uusimaa တောင်တန်း၏ဆောက်လုပ်ရေး
Österströms Baker Cabin အသင်းမှနှစ်ပတ်လည်အစည်းအဝေးကျင်းပ
Holmes အတွက်လူသားခငျြးအာူးအပေါ် SVT အစီရင်ခံစာ
စီမံကိန်းအားဖြည့်အိမ်နီးချင်းအပေါ် SVT Holmes
မင်္ဂလာ Valentine Day ကို Anund လယ်ယာမူကြိုဆန္ဒရှိသော်လည်း
Jesper Eliasson – Sunnansjöကနေနယူး revue ကြယ်ပွင့်
သင့်ရဲ့အသံကိုကျွန်တော်ကြားလျှင် Make! ကြည့်ရှုပါရှိရာအခါစတော့ဟုမ်းဒေသခံများကရွေးကောက်ပွဲနေ့၌မဲပေး
Indals IF – Holmes SK ကို. ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ယနေ့ညတိုက်ရိုက်လွှင့် 18,30
ကယ်ဆယ်ရေး Holmes နှင့် Liden န်းကျင်မြောက်မြားစွာလျှပ်စီးသပိတ်အပြီးယနေ့ညသတိပေး
Holmes SK ကို – Hassels IF. 24 ဇွန်လ 2018
Selånger FK – Holmes SK ကို. 20 ဇွန်လ 2018
Holmes SK ကို – Ljustorps IF. ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ 19.00
Ange IF – Holmes SK ကို.6ဇွန်လ 2018
Holmes SK ကို – Medskogsbrons ကယ်အိမ်မှာဂိမ်းဗုဒ္ဓဟူးနေ့
Matfors IF2– Holmes SK ကို. 27 မေ 2018
Österströmအတွက် Fleamarket 9/6
Alno IF – Holmes SK ကို
စီးရီး Premiere Holmes SK ကို vs ၏တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ယနေ့ည. Viskans IF
Holmes Fiskevårdsområde၏နှစ်ပတ်လည်အစည်းအဝေးကြာသပတေးနေ့ 12/4
HBU နှစ်ပတ်လည်အစည်းအဝေးရရှိထားသူ 20/3
ဆောင်းရာသီအားလပ်ရက်သားရဲ့နေ့ Allbergsbacken အတွက်ဝက်အူချောင်း Tobogganing နှင့် grilling 7/3
Ingegerd Raffles တက်အတွက်ခဲဖွယ်စားဖွယ်တောင်းကိုအနိုင်ရခဲ့!
Andreas Sahlin နှင့်သောမတ်စ် Mehlin ပြဇာတ်ရုံလုပ်နေတာ
Storjärptjärnငါးဖမ်း fr.o.m မှပိတ်ထား. 10 မေ
အားဖြည့်အိမ်နီးချင်း၏မီးကနေကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ရ၏အိမ်များ – တစ်ဦးကိုသင်ဖြစ်လာအတူ!
Holmes ပုလဲ – ရောင်းရန်တပ် ချ. သဲNäsets!
Holmes Fiskevårdsområde၏နှစ်ပတ်လည်အစည်းအဝေးကိုတနင်္ဂနွေ 19/3
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဖိုင်ဘာအချိန်! – ကမ်းလှမ်းမှုကို t.o.m. 31/3!
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Allbergsbacken အတွက်Pulkåkning 8/3
HSK နှစ်ပတ်လည်အစည်းအဝေးကိုတနင်္ဂနွေ 26/2
ဆက်သွယ်ရေးစခန်းAnundgårdချမှတ် – လွန်ရာစုနှစ်အပေါ်ကိုပြန်ရှာနေ
ဆုံးဖြတ်ချက်များ: Holmes ဖို့ဖိုင်ဘာအဘို့အခွင့်ပြုခဲ့အကူအညီ!
Anund လယ်ယာကျောင်းကို / ကျောင်းကိုအပေါ်လူစီယာအထိမ်းအမှတ်ပွဲများကျင်းပနဲ့အတူပွင့်လင်းအိမ်သူအိမ်သား 9/12
အင်ဖို Landsbygdsriksdag 2018: ယင်းစီရင်စုနယ်အိမ်မှာကျေးလက်ရေးရာဆွေးနွေး 23/11 တွင် 19
တိုက်ရိုက်: IF Göran Frisk Hassels ဆန့်ကျင်တစ်ကျော့ပြန်စေသည်!
White ကလမ်းညွှန်-ဗိုလ်လုပွဲအတွက် Holmes နှင့် Liden ကျောင်းမှမာစတာစားဖိုမှူး
ယနေ့ညLIVSÄNDNING: Kubikenborgs IF – Holmes SK ကို
ယနေ့ညLIVSÄNDNING: Holmes SK ကို – INA အက်ဥပဒေ Sundsvall 2
Big ကျောက်ခေတ် boathouses အပေါ် Hembygdsdag 3/7
Österströmဝစွာအတွက်စစ်ပွဲဝါရင် 60 နှစ်ပေါင်း
အားလုံးဘောလုံးကွင်းမျိုးကွဲများအပါအဝင်. ဥရောပချန်ပီယံရှစ်အဘို့အတီဗီကြိမ်ယခုနှစ်နွေရာသီတွင်, THE, HSK နှင့် GIF ကို
အကြီးစားမီဒီယာလွှမ်းခြုံယနေ့ည 19:00 Holmes တာတမံမှာ!
Holmes Fiber နှစ်ပတ်လည်အစည်းအဝေး 12/6 နှင့်မြန်နှုန်း၏အသိပေးစာ!
ထုတ်လွှင့်ဒီည LIVE 19.00: Holmes – ကုဗတုံး
Holmes Vallen မှာမိုဘိုင်းပြန်လည်ယနေ့ည
ထုတ်လွှင့်ဒီည LIVE 19.00: Derbymatch Holmes SK ကို – Kovlands IF
ရောင်းရန် Liden အတွက်နှင့် ICA စတိုးဆိုင် – ထို့အပြင်ဘူတာရုံ
Nashville ထံမှ Jenn Bostic Holmes အတွက်ဂီတရေးသားခဲ့သည်!
ကိုယ့် Sundcupen Holmes SK ကိုsilvermedaljörer!
#ShepherdsHut årsmöte 22/3, နွေးထွေးစွာကြိုဆို!
အဆိုပါ bookmobile “Mobibblan” – အဆိုပါလှိမ့်စာကြည့်တိုက်
Holmes SK ကိုအဆိုပြုရတိုင်း 5
2 လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း “Ivar” – SMHI နောက်တဖန်ကသတိပေး!
Holmes အတွက်စေတနာ့ဝန်ထမ်းကျေးဇူးတင်မတော်တဆမှုကျန်ရစ်သူ၏ သာ. ကောင်း၏အခွင့်အလမ်း!
Håkan Larsson /”သတ္တုရိုင်း Properties ကို”: ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်မှုဘုတ်အဖွဲ့မှ false စာရွက်စာတမ်းများ, ပြီးအင်တင်းခဲ့သည်သည့် F-အခွန်နှင့်အသစ်ကုမ္ပဏီအမည်ကို
Håkan Larsson Bilkonsult AB မလွဲမသွေ, နေဆဲ Holmes အတွက်ရွှေ့ပြောင်းဘုတ်အဖွဲ့စစ်ဆေးခြင်း
Holmes SK ကို – Alno IF 2
က "စားသောက်ဆိုင်အခွင့်အလမ်းတွေကို" အမိန့်, ထောက်ခံမှု Holmes အသင်းအဖွဲ့များ!
အသက်ရှင်သော: Holmes SK ကို – INA အက်ဥပဒေ Sundsvall 2
Holmes Vallen မှာ Huey ပွဲစဉ် 22/8
နယူးပိုင်ရှင်Håkan Larsson Johan Stendahl အကြောင်းကိုရုပ်မြင်သံကြားအပေါ်လိမ်ညာ
SVT: Håkan Larsson ပြင်ဆင် “Stendahl skandalhus” ရွှေ့ပြောင်းခြင်းဘုတ်အဖွဲ့
Loviken အတွက် traffic မတော်တဆမှု
“တိုးမြှင့်အိမ်နီးချင်း” – အောင်မြင်စွာကျေးလက်ဒေသများတွင်
Storås Natta 2015, ဤနေရာတွင်စာအုပ်ကခုန်နည်းပြ!
အသက်ရှင်သော: INA အက်ဥပဒေ Sundsvall2– Holmes SK ကို
အသက်ရှင်သော: Holmes SK ကို – Essviks AIF
Holmes အတွက်ခရီးသွားဆွဲဆောင်မှု: Safari ကကိုထမ်း
အသက်ရှင်သော: IFK Timrå2– Holmes SK ကို
200 ခိုလှုံခွင့်တောင်းခံရန် “Stendahl Skandalhus”?
တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ယနေ့ည! Holmes SK ကို – Hassels IF
Holmes Vallen မှာ Little ကလိဂ်
Holmes Fiber နှစ်ပတ်လည်အစည်းအဝေး: နောက်ဆုံးပေါ်သတင်း!
ဝက်ဘ်ဆိုက် Anund လယ်ယာမူကြို
နှစ်ပတ်လည်အစည်းအဝေးကို Holmes Fiber
ဧရာအီစတာဥ HSK နှင့် HBU!
Ladle = တစ်ဦးတစ်ပြားမှအထောက်အကူဖြစ်စေနိုင်ရန်ကတိပြု!
Holmes FVO ၏နှစ်ပတ်လည်အစည်းအဝေးယနေ့ည!
4Holmbygden သို့မရောက်မှီတိုင်အောင်, G-မာစတာ!
“ဆက်လက်နှစ်ပတ်လည်အစည်းအဝေး” 30/3 Holmes တာတမံမှာ
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ညဉ့်တွင် Allbergsbacken အတွက် Sledding နှင့် grilling!
ကွိုဆို HBU ရဲ့နှစ်ပတ်လည်အစည်းအဝေး 2015
troubadour နှင့်အတူဒစ္စကိုစကိတ်စီး 20/2!
တနင်္ဂနွေ HSK နှစ်ပတ်လည်အစည်းအဝေး 15/2
စနေနေ့ကသောဝိညာဉ်တော်သည်ဝါသနာရှင်ရွာပါတီ 31/1 တွင် 17, ကြိုဆိုပါတယ်!
Holmes အတွက်ဖွင့်လှစ် Medelpad ရဲ့ပထမဦးဆုံးလေတိုက်လယ်ယာ
ဂျက်စီကာ Falk မှာပွင့်လင်းအိမ်သူအိမ်သား “အဟောင်းကိုAffär'n”
Lille ခင်မှာစကိတ်စီး(ဗလာဖြစ်သော)Holmes အတွက်ရေကန်
Wanted သည့်ကိတ်ကွင်းများအတွက် tank!
ဂျက်စီကာ Falk နှင့်အတူအသင်းတော်၌ဖျော်ဖြေပွဲ
Holmes Fiber – လုပ်ငန်းတိုးတက်မှုအစီရင်ခံစာ!
လုပ်သာလုပ်ပါ! – ဂျက်စီကာ Falk အသစ်ကတစ်ခုတည်းနှင့်ဂီတဗီဒီယိုဖြန့်ချိ!
Häsofrossaလီနာ Redman Med
ဘွတ်ဖိနပ် Jean & ဂီတအိပ်မက်များ, NY ပြပွဲ 11/10 ဂျက်စီကာ Falk နှင့်အတူÖsterströmအပေါ်
Holmes Vallen မှာ Holmes လူငယ်များအတွက် Kickoff, လာ. ရူ့!
အမိန့် “Restaurangchansen” အခုတော့ Holmes အသင်းအဖွဲ့များကိုထောကျပံ့!
Finezze နှင့်အတူစပါးကျီကခုန်ခြင်းနှင့်surströmmings- / crayfish ဘူဖေး
Holmes Vallen မှာအရေးကြီးဂိမ်းယနေ့ည
ရွှေ့ပြောင်းဘုတ်အဖွဲ့: Holmes အတွက်အဘယ်သူမျှမခိုလှုံခွင့်နေရာထိုင်ခင်း
Storås Natta မှီတိုင်အောင်ကခုန်ဘတ်စ်ကား
စစ်ပြန် Holmes Vallen မှအိမ်ပြန် လာ. ,
Holmes Vallen မှာ Homecoming!
Holmes Vallen မှာ Split ကို Pot ယနေ့
Österströmမှာ Midsummer တွေ့ဆုံ
Big ကျောက်ခေတ် boathouses အပေါ် Hembygdsdag
Holmes Vallen မှာ Boccia, ပွင့်လင်းမှုတော်ကိုထမ်းဆောင်!
ဓါးမှာနွေရာသီကို Premiere Tjärn
Holmes လူအစုအဝေးချမ်း braved နှင့်နေအိမ်အနိုင်ရရှိနှင့်အတူဆုခခြံခဲ့ရ
Holmes Vallen မှာစီးရီး Start ကိုမနက်ဖြန်!
ကျောက်စရစ်နှင့်ခြံစည်းရိုး၏ Holmes တာတမံမှာ vandalism
Holmes Vallen မှာသတ္တုစုစည်းမှု!
နွေဦးနေရောင်, Holmes တာတမံမှာmålkalasနှင့်နာကျင်မှု
နွေဦးနေရောင်ခြည်အတွက် Holmes Vallen မှာပြိုင်ဘက်အစည်းအဝေး!
၏ Holmes အတွက် Vetenskapsradion “အားဖြည့်အပေါင်းအဘော်တို့”
စီးရီး Holmes SK ကိုများအတွက်သတိပေးချက် Form ကို
ဂျက်စီကာ Falk ဂျာမနီမှာတိုင်းပြည်ဂီတ Gala ကစား
Ridge လမ်းမကြီးပေါ်တွင်မော်တော်ကားသမား, hit ခံရ!
ST: Falk များအတွက်နယူးခရီးစဉ်
ရွာသားများ '' စိုးရိမ်ပူပန်မှုများစစ်မှန်တဲ့လာ – Elen ဈ “skandalhusen” ချွတ်ပြန်လည်
HSK Premiere အပူဖလား
Vikestafetten နှင့်barnskidtänvlingen set ကို
Holmes အတွက်ကတိထားတော်သည် သာ. ကောင်း၏မိုဘိုင်းလွှမ်းခြုံ
cabin Holmsjönန်းကျင် Wanted
Holmes Fiber: အဖွဲ့ဝင်များနှင့်အခြားစိတ်ဝင်စားဘို့အင်ဖိုအစည်းအဝေး
GOAL (မဟုတ်) အဆိုပါကိတ်ကွင်းမှာအခိုးခံရ!
မုန်တိုင်း Ivar ပြီးနောက်လေယာဉ်ခရီးစဉ်စောငျ့ခေါ်ရန်
Holmes အတွက် single-မော်တော်ယာဉ်မတော်တဆထိခိုက်မှု – အစွန်းရောက်ချော၏သတိပေးခြင်း!
သို့တိုင်အာဏာနှင့်တယ်လီဖုန်းမပါဘဲ Holmes တာအတွက်
မုန်တိုင်း Ivar ပြီးနောက် Holmes ၏ဆိုးကျိုးများ
အလုပ်သမားများမှာ “Skandalhusen” စာမစားဘဲကျန်ရစ်, ပိုက်ဆံသို့မဟုတ်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနည်းလမ်းများ
Sundsvall Tidning အတွက် Holmes Fiber
ခရစ္စမတ်ညစာနှင့်အရက်ဆိုင်ညနပေိုငျးက x 2
Holmes ဖိုင်ဘာအသင်းအဖွဲ့ join နှင့်ဖိုင်ဘာဘရော့ဘန်းဖို့အခွင့်အလမ်းများ!
HSK ရဲ့ “Guldfemman” ပိတ်ထားသော
ရွှေ့ပြောင်းခြင်းဘုတ်အဖွဲ့ commented “Skandalhusen” သတင်းအတွက်
ရွှေ့ပြောင်းဘုတ်အဖွဲ့: အဘယ်သူမျှမခိုလှုံခွင့်နေရာထိုင်ခင်း “Skandalhusen”
Marcus Hamberg ထစွမ်းအင်ကြေညာချက်များအတွက်မဆိုပါဝင်ပတ်သက်မှုငြင်းဆို
Sundsvall မြူနီစီပယ် Holmes အတွက်နိုင်ငံရေးခိုလှုံခွင့်နေရာထိုင်ခင်းကိုလက်ခံရရှိ
ÖSTERSTRÖM: ဖခင်များနေ့ဘူဖေး, Pubafton, ခရစ္စမတ်နှင့်များ၏ Premiere “Birsta ဘတ်စ်ကား”
ထစွမ်းအင်လက်မှတ် AB နှင့် Johan Stendahl အကြားနယူးဆက်သွယ်မှု
မှာ Oliver, 12, ရှိုကနေအသစ်အဆန်းဆွဲယူ
ထစွမ်းအင်လက်မှတ် AB လျှောက်လွှာအတွက်ရွှေ့ပြောင်းဘုတ်အဖွဲ့မှလိမ်
အဆိုပါ HSK ၏နောက်ဆုံးလိဂ်ပွဲစဉ်အတွက်အရှုံး
ရွှေ့ပြောင်းခြင်းဘုတ်အဖွဲ့ Holmes အတွက်နိုင်ငံရေးခိုလှုံခွင့်နေရာထိုင်ခင်းနှင့်ရင်ဆိုင်နေရသည်ယနေ့စစ်ဆေးခြင်း
ကြိုးစားအားထုတ်မှု HSK တိုက်ခိုက်နေသည့်ကြားမှအရှုံး
200 Johan Stendahls မှခိုလှုံခွင့်တောင်းခံ “skandalhus” ကိုယ့် Holmes!?
လတ်ဆတ်တဲ့ကယ်တင်နိုင်ခဲ့ HSK ၏နှောင်းပိုင်းကအသိအမှတ်ပြု
Anund လယ်ယာမူကြို 20 နှစ်ပေါင်း
သစ္စာစောင့်သိပရိတ်သတ်တွေဆောင်းဦး Chilling အတွက်ဆုံးရှုံးမှုကိုမြင်လျှင်
တနင်္ဂနွေ Holmes Vallen မှာဂိမ်းအသစ်အချိန်
ဆောင်းဦးရာသီစီးရီး Holmes SK ကိုရေးဆွဲခဲ့
ကြီးမားသောအနိုင်ရရှိနှင့်အတူ Holmes Vallen မှာလှပသောနွေရာသီညနပေိုငျး, အခုတော့အပေါ် PLAYOFF ကစတင်ခဲ့သည် 4:တစ်ဦး!
ဖျော်ဖြေပွဲ: ဂျက်စီကာ Falk ဂီတဒဏ္ဍာရီနှင့်အတူကစား
Österströmမှာစပါးကျီကခုန် 31 သြဂုတ်လ
Ljustorp ဆန့်ကျင် shared အိုး
အဆိုပါ bookmobile Gimåforsလည်းယခုပြေး
က Wired အစည်းအဝေးများယခုအပတ်
Alno ဆန့်ကျင်အဆင်သင့် Holmes Seger
အဆင့်မြှင့် Holmes-Torpshammar လမ်း
MFF အဘုတ်အဖွဲ့ Holmes Sportklubb သွားရောက်ကြည့်ရှု
Kanotuthyrning – ခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်း / အပန်းဖြေဘို့နယူးစာမျက်နှာ
ဆွီဒင်ရေဒီယိုအပေါ်ဂျက်စီကာ Falk နှင့်အတူအင်တာဗျူး
နယူးစီးရီးစနစ်များ Holmes SK ကို
သင်္ဘောသားနှင့်အတူ pinch ရှိနေသော်လည်း Holmes Gain
Holmes SK ကိုတက်မတ်တပ်ရပ် 60 ငါ၏အတိုင်း3သင်းဆန့်ကျင်
စနေနေ့က Holmes Vallen မှာလုပ်ဆောင်ချက်နေ့က
Holmes 30 နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်အတွက် Hembygdsdag
ဂျက်စီကာ Falk ဈ ST: “ဘဝက 40 မှာစတင်”
Holmes Vallen အပေါ်တစ်ဦးဆုံးရှုံးခြင်းမှာနွေးထွေးသောနွေရာသီညနပေိုငျး
Hembygdsföreningenအောင်မြင်စွာကျင်းပနိုင်ခဲ့ 30 နှစ်ပေါင်း
မနေ့ကရဲ့ပွဲစဉ် Bonna အတွက် HSK အောင်ပွဲ
လွန်းခေါင် midsummer ကခုန်
ထိပ်သီးအစည်းအဝေးအတွက် HSK အဘို့အသုံးလှပသောအချက်များ
အားကစားကလပ် midsummer အပေါ်အကူအညီတောင်းလိုအပ်ကြောင်းကိုကြေညာ
Ljungalid အပေါ်အပြည့်အဝ Kitty HSK
ညီအစျကို “HSK” Dagbladet
1/16-Lucksta ဆန့်ကျင်ဗိုလ်လုပွဲikvällens DM-ပွဲ
IFK ဆန့်ကျင် HSK အဘို့အရှုံး 3
Sund လျှင်ဆန့်ကျင် HSK အဘို့အနိုင်ရကွာပစ်မှတ်ထား 2
အသက်ရှင်သော: GIF ကို Sundsvall-Hammarby IF
အင်္ဂါနေ့က broadband အစည်းအဝေး
စနေနေ့က Holmes Vallen မှာပြောင်းရွေ့ပွဲ
စွန့်ပစ်စီမံခန့်ခွဲမှု – အသစ်ကစာမျက်နှာ
ဓား Tarn ၏နွေရာသီကို Premiere
အနိုင်ရလမ်းကြောင်းအပေါ် HSK နောက်တဖန်
အဆိုပါအပန်းဖြေကလပ် Holmes အတွက်ဖွင့်လှစ်!
ဓား Tarn ၏နွေရာသီကို Premiere ရက်ရွှေ့ဆိုင်း
အိမ်မှာ Premiere အတွက်အကျိုးအမြတ်!
အဆိုပါ HSK စီးရီး Premiere အဘို့အမြတ်!
နောက်ဆုံးမိနစ်: အဆိုပါ HSK ရဲ့ Play “Guldfemman” စီးရီးစတင် innan
အဆိုပါ website တွင်နယူးသတင်း archive ကို
ဝန်ဆောင်မှုများအတွက် Bookmobile အချိန်ဇယား
များအတွက်အစားအသောက်ဆိုင်၏ဆလိုက်သို့မဟုတ်အမိန့်အိမ်မှာအိတ်ဖို့ဘတ်စ်ကားဝန်ဆောင်မှုကိုယူ 30 Kr!
အပိုနှစ်ပတ်လည်အစည်းအဝေး HBU က F / T က
Drakabergets SK ကို PA Holmbygden: အသစ်ကnyhetsfält, M.W. ledkarta.
နှစ်ပတ်လည်အစည်းအဝေးကို HBU က F / T က
Holmes SK ကိုဈVärmecupen
Vasan အတွက် Indal-Liden များအတွက်Svårvallat
အတွက် Holmare “ဘိုးဘေးတို့လမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်”
HSK Berners ဖလားကဒီတနင်္ဂနွေ play
စနေနေ့မှာပြန် Holmes အတွက်ဝိုင်းရံကြဖို့
Holmes ပြိုင်ဘက် Solvalla မှာတက်စေသည်!
Björn Norling နှင့်အတူစိတ်ကူးအစည်းအဝေးယနေ့ည
နှစ်ပတ်လည်အစည်းအဝေးကို Holmes SK ကို
“ဝမ်းမြောက်ခြင်းအသံတွေကို” – ဂျက်စီကာ Falk နှင့်အတူနယူးပြေး
Kväcklingenအတွက်ရောက်သည်နှင့် Wolverine Kvissle အိမ်မီး
Holmes ရဲ့သက်တန့်အရောင်တက် lit
အသက်ရှင်သောသတ္တဝါ Holmes ဘို့စိတ်ကူးအစည်းအဝေး, Österströmအပေါ်
စကိတ်စီးခြင်း – ဒစ္စကို!
အဆိုပါရေခဲ, G အပေါ်ဖြစ်ပါသည်
ဘုရားသခင့ Jul (နှင့်အသွားအလာဒရာမာ) Holmes Bygden
Holmes ရဲ့အသစ် “ဒေသခံအသက်ကယ်”
လူစီယာ Holmes လည်ပတ်ခဲ့
တစ်နှစ်ရဲ့ဆုကြေးဇူးကို? Holmes စာအုပ်ဝယ်ရန်!
က Man Loviken ၌သေတွေ့ရှိရ
ခရစ္စမတ် Market က
ခွက်ကျော် Holmes ရဲ့အနာဂတ်ဆွေးနွေး
အိမ်ငှါး 2:အပေါ်ရောင်းရန်တစ်ဦးက “အခြေချနေထိုင်မှု”
အသက်ရှင်သောသတ္တဝါ Holmes တွေအတွက်အကြံပြုချက်များ! Tors. 19:00
အတိမ်အနက်ကို Maps ကိုဖိအား! သင့်ရဲ့ကြော်ငြာနှင့်အတူ?
အဆိုပါ bookmobile အရှုံးမပေးမည်မဟုတ်
ဖျာ Mehlin ခရိုင်အတွင်းပျောက်ဆုံး
မကောင်းတဲ့ပွဲစဉ်အတွက် split Pot
“AND” Loviken အတွက်လေတိုက်လယ်ယာများအတွက်
Jaktdags ဈ Holmskogarna!
Lysnatta ပြီးနောက် HSK အဘို့အပေါ့ပါး
Fotbollslek / လေ့ကျင့်ရေး
Holmes Vallen မှာ Split ကို Pot
ဆက်လက်ဆိုးရွားလမ်းကြောင်းသစ် Holmes SK ကို
အချိန်ပို HSK ၏ရှက်စရာအရှုံး
Bryan Adams Holmes SK ကိုငှားရမ်းနေ
Östavall Holmes Vallen မှာအနိုင်ရ
တဏှာသည်ပျဉ်ပေါ်မှာ HSK များအတွက်ဖျော်ဖြေ
ဝန်ဆောင်မှု-စာမျက်နှာ update ကို
အဆိုပါခုံတန်းလျား Stockvik / Granlo ဆန့်ကျင်ထွက်အုပ်ချုပ်
လေယာဉ်ပေါ် Engman ရှငျဘုရငျ
Holmes ရဲ့ပန်းရန်ပုံငွေအဖွဲ့ posted
Holmes သုည Ljungalid combed
ရုပ်ရှင် – “အဆိုပါမှော်အရင်းအမြစ်”
Sund ဆန့်ကျင်လုံခြုံစွာအိမ်ပြန်အနိုင်ရ 2
Holmes ရဲ့နှလုံးအကူစက် – ယခုဝန်ဆောင်မှုအတွက်!
Holmes Vallen မှာနေအိမ် Premiere!
Holmes ရဲ့အသစ်နှလုံးအကူစက်၏ဆန္ဒပြ 15/5!
တစ်ဦးက lagsmatch အရက်ဆိုင်ညဥ့်နှင့် HSK-directional
Little ကအဖွဲ့ချုပ်အဘို့အ Start-up,!
အဆိုပါ Holmes-Liden အကြားရွှံ့
Holmes / Indal / Liden ၏ bra အဖွဲ့အစည်းအဝေးဖိတ်ခေါ်
အဘယ်အရာ Holmes အတွက်ကျောင်းအစည်းအဝေးအပေါ်ပြောဆို 28/2
ပိုများသော skis! ကျောင်းမှာ Semmelloppet.
Holmes ကနေ Sundsvall ဖို့ဘတ်စ်ကားအစောပိုင်းကစုစုပေါင်း
HBU က F / T ရဲ့နှစ်ပတ်လည်အစည်းအဝေး
Allbergsbacken အတွက်ဝက်အူချောင်းကင်နှင့် tobogganing
ကျောင်းကပေါ်အစည်းအဝေး – ခရိုင်အနာဂတ်
Allbergsbacken – နင်းနှင့်စီးနင်း
နှစ်သစ် + အသစ်ကလိပ်စာ + နယူးက်ဘ်ဆိုက် = Holmbygden.se
မုန်တိုင်း Dagmar ကိုခြေရာခံ
ကိတ်မုန့်နှင့်အတူဆုခခြံအလက်ဇန်းဒါး Hjelm Åslin
ဟောင်းတဦး Holmbygden.nu ကနေအားလုံးအဟောင်းသတင်း
Förstärkningsarbete, trafiken regleras med lots.<... ဆက်ဖတ်ရန်